5 Booqasho oo u dhow Florence | Wararka Safarka
Susana Garcia | | Getaways Yurub, Florencia, Italia
Florence waa meel aad loo raadsado ka dib marka loo socdo, maadaama ay tahay magaalo Talyaani ah oo raaxo leh oo aad ku arki karto shaqooyin farshaxan oo waaweyn iyo dhul duug ah oo runtii qurux badan. Laakiin magaaladan ka baxsan, waxaa jira meelo aad u xiiso badan oo aan tixgelin karno. Haddii aan haysanno dhowr maalmood waxaan u adeegsan karnaa qaar ka mid ah si aan u aragno magaalooyinka u dhow, tan iyo Florence waa magaalo yar kuwaas oo qodobbada ay xiiseynayaan si dhakhso leh loo booqdo.
Magaaladani waa mid aad u xiiso badan, laakiin meel u dhow ayaan ka helaynaa geesaha soo jiidashada leh ee Tuscany ama meelo xeebta ku yaal oo neefta naga qaadi kara. Markaa waa inaynaan ku khasaarin safarka oo aan u dhowaanno meelahan yar-yar ee u dhow, maxaa yeelay waxay noqon doonaan daah-fur.
Yaan aqoonin munaaraddii Pisa? Magaaladan dekedda yar waxay ku taal gobolka Tuscany, waana magaalo aad u yar, oo hal maalin la booqan karo, gaar ahaan iyadoo la tixgelinayo in inta badan dalxiisayaasha ay kaliya doonayaan inay sawir qosol leh ka qaadaan Tower of Pisa. Aaggan taariikhiga ah kaliya kama helayno munaaradda, taas oo caan ku noqotay tartiib tartiib u tiirsanaan sababtoo ah way is dhiibaysaa. Waxaan sidoo kale leenahay Duomo iyo Baptistery. Waa dhisme qurux badan oo qurux badan, oo lagu sameeyay qaab ay ugu yeedheen Pisan, laakiin kaas oo ay dhiirrigelisay Romanesque. Isla magaaladaas waxaa ka jira kaniisado kale oo ku dayana qaabkan gaarka ah, sida Santa Chiara ama Santa Cristina. Waa magaalo aad u yar oo aan hal maalin ku booqan karno iyada oo taalooyinkeeda la dhistay, waxayna ku taal meel 85 kiiloomitir u jirta magaalada Florence, markaa waqti dheer kuma qaadan doonno inaan halkaas ku tagno.
Tani waa magaalo kale oo 70 kilomitir u jirta Florence oo waliba leh taariikh badan iyo jidad qurxoon iyo taallo. Isaga xarun taariikheed Waxaa lagu dhawaaqay inay tahay Goob Hidaha Dunida. Piazza del Campo waa barxad aad u muhiim ah, waana mid ka mid ah fagaarayaasha qarniyadii dhexe ee ugu wanaagsanaa ee Yurub, halkaas oo aan had iyo jeer ka arki karno dhaqdhaqaaq badan. Fagaarahaani wuxuu u badan yahay inaad adigu taqaan, maxaa yeelay Palio de Siena oo caan ah ayaa halkan lagu qabtaa, tartan faras oo ku wajahan degmooyinka magaalada.
La Cathedral ama Duomo ee Siena Sidoo kale waa dhisme qurux badan oo soo jireen ah laga soo bilaabo qarnigii XNUMXaad, in kasta oo dhismuhu sii socday sannadihii dambe. Dhexdeeda ma seegi kartid fuulitaanka aragti si aad u hesho aragtida ugu wanaagsan ee magaalada. Haddii aad ku daasho taallooyin aad u tiro badan oo aad rabto inaad wax iibsato, waxaad aadi kartaa Via Bianchi di Sopra, oo ah waddada ganacsiga iyo meelaha dalxiiska ugu badan.
Cinque Terre maahan magaalo ama magaalo, laakiin waa guud ahaan aagga xeebta taas oo aan ka helno shan magaalo oo yaryar oo ku yaal buuraha dusheeda oo aan u jeedno xagga badda. Booqashadani waa wax lagu farxo dareenka, maaddaama kaadhadhka Cinque Terre ay adag tahay in la ilaawo. Tuulooyinka kalluumeysiga ayaa hadda ka dalxiis badan, oo aan ku gaari karno doon ama waddooyinka rogmada. Buurta dusheeda waxaan ku arki doonnaa guryo midabo badan leh, oo faraxsan, waxna waan ku waayi karnaa waddooyinka cidhiidhiga ah ee magaalooyinkan gaarka ah. Kuwani waa shan magaalo oo ku yaal aag qiyaastii ah 18 kiiloomitir xeebta, Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola iyo Riomaggiore. Shaki la'aan, waa nasasho laga helo magaalooyin ay dad badani ka buuxaan, maadaama ay yihiin magaalooyin yar yar oo xeebeed aan ku booqan karno xasillooni.
Hadaad jeceshahay filimka 'Qorraxda Tuscan hoosteeda', waxaad awoodi doontaa inaad dib uhesho daqiiqadihii ugu fiicnaa ee halyeeyadeeda magaalada Cortona, maadaama ay ahayd goobtii loo doortay inay matalaan magaalada caadiga ah ee xasilloon ee gudaha Tuscany. Shaki la’aanna si wanaagsan ayaa loo doortay, maxaa yeelay tani waa si sax ah waxa aan ka heli doonno markaan gaarno Cortona. Waa magaalo qadiimi ah oo ay aasaaseen Etruria, halkaas oo lagu ilaaliyo kaniisadihii hore iyo jidadka cidhiidhiga ah. Waad sameyn kartaa booqasho gaaban oo nus-maalin ah, gaar ahaan goob aad ku raaxeysan karto xasilloonida ugu kalsoon ee Tuscany. Booqashooyin ahaan, waxaan aadi karnaa meelaha xiisaha leh sida Hermitage of Unugyada ama Palazzo Comunale.
Magaalada San Gimignano waxaa si fiican looga aqoonsan yahay muuqaalka Tuscan iyada afar iyo toban munaaradood, taas oo aan ku qasbanaan lahayn inaan ku darno 58 kale oo hore u jirtay, oo la dhisay iyada oo ujeedadu tahay in la muujiyo awooda qoysaska ugu saameynta badan. Maanta waa Goobta Dhaxalka Adduunka, iyo magaalo yar oo qadiimi ah oo aan ku raaxeysan karno inaan ku dhex marno waddooyin duug ah. Magaaladani waxay ku taal meel qiyaastii 60 kiiloomitir u jirta Florence, waxaanan ku soconnaa jidka loo maro Siena, markaa waxaan ka samayn karnaa joogsi yar halkaas oo aan ugu raaxeysanno dhismayaasha hore iyo fagaarayaasha xasilloon.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Magaalooyinka » Florencia » 5 Booqasho oo u dhow Florence
Florence inkasta oo ay yartahay waxa kujira 60% farshaxanka Renaissance aduunka oo dhan, hadana si sax ah looma arkin isla markiiba. Waxaan ku dari lahaa Fiesole, Arezzo, Lucca, Asisi, Vinci, Castiglioncello, Viareggio, Forte dei Marmi iyo Island of Elba. Xaqiiqdii, magaalada Pisa waxaa ku yaal oo kaliya munaarad ahaan xiisaha iyo ugu badnaan guriga Galileo. Xaqiiqdii tan xigta ayaa kaaga fiicnaan doonta!
Ku jawaab Vicente esteban
Tilmaamaha booqashada Moscow